DOWNLOAD NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA MAKA CANON MP210 - NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA - 2019
Ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka Canon PIXMA MP210 MFP
Ọ bụrụ na ọ na-amasị gị ịbanye n'ime mmemme dị iche iche na egwuregwu kọmputa, mgbe ahụ ị maara nke ọma na Engine Engine. N'isiokwu a anyị ga-achọ ịkọwa maka otu esi eme omume na usoro a kpọtụrụ aha iji họrọ ọtụtụ ụkpụrụ nke adreesị ndị ahụ n'otu oge.
Weghaa njirimara ọhụrụ nke igwe ejiji
Maka ndị na-amabeghị otu esi esi eji Engine Engine, ma chọọ ịmụta otú e si eme nke a, anyị na-akwado ịgụ akwụkwọ anyị pụrụ iche. Ọ na-akọwa n'ụzọ zuru ezu ọrụ ndị dị mkpa nke ngwanro ahụ ma nye ntụziaka zuru ezu.
Gụkwuo: Ntugharị ejiji ejiji
Nhọrọ maka ịhọrọ ụkpụrụ niile na igwe ejiji
Na Engine Engineering, ọ dị mwute, ọ gaghị ekwe omume ịhọrọ adreesị niile ịchọrọ site na ịpị igodo Ctrl + A, dika ederede ederede. Ka o sina dị, e nwere ọtụtụ ụzọ na-enye gị ohere ịrụ ọrụ a chọrọ. N'ozuzu, e nwere ụzọ atọ dị otú ahụ. Ka anyị lee anya na nke ọ bụla n'ime ha.
Usoro 1: Nhọrọ ọzọ
Usoro a ga-enye gị ohere ịhọrọ ma ụkpụrụ niile na ụfọdụ ụfọdụ. Ọ na-agụnye ndị na-esonụ.
Anyị na-amalite Engine Engine na anyị na-ahụ ụfọdụ nọmba na ngwa dị mkpa.
Na mpịakọta aka ekpe nke window mmemme ahụ, ị ​​ga-ahụ ndepụta nke adreesị na ọnụahịa a kapịrị ọnụ. Anyị agaghị echebara ihe a echiche n'ụzọ zuru ezu, ebe ọ bụ na anyị kwurula banyere nke a n'otu isiokwu dị iche, njikọ nke e depụtara n'elu. Nzuzu n'ozuzu nke data achọtara dị ka ndị a.
Ugbu a anyị na-agbanye igodo dị na keyboard "Ctrl". Na-enweghị ịtọhapụ ya, pịa bọtịnụ òké aka ekpe na ndepụta nke ihe ndị ahụ ịchọrọ ịhọrọ. Dịka anyị kwuru na mbụ, ị nwere ike ịhọrọ ma ọ bụ naanị ụfọdụ n'ime ha. N'ihi ya, ị ga-enweta foto na-esonụ.
Mgbe nke ahụ gasịrị, ị nwere ike ịrụ ọrụ ndị dị mkpa na adreesị niile ahọpụtara. Biko rịba ama na usoro a agaghi adi nma n'omume ebe ndepụta nke ndi choro di oke. Ịhọrọ ihe ọ bụla ga-ewe ogologo oge. Iji họrọ ụkpụrụ niile nke ndepụta ogologo, ọ ka mma iji otu n'ime ụzọ ndị a.
Usoro 2: Nhọrọ ahọrọ
Usoro a ga-enye gị ohere ịhọrọ ụkpụrụ niile nke Engine Engine dị ngwa karịa na nhọrọ nhọrọ. Nke a bụ otu e si eme ya.
Na Engine Engine, mepee window ma ọ bụ ngwa nke anyị ga-arụ ọrụ. Mgbe nke ahụ gasịrị, debe isi ọchụchọ ma chọọ nọmba chọrọ.
Na ndepụta ahụ achọrọ, họrọ ezigbo uru. Iji mee nke a, pịa ya ozugbo na bọtịnụ òké aka ekpe.
Anyị na-ejikarị aka na keyboard Mgbanwe. Na-ahapụghị igodo ahụ a kapịrị ọnụ, ịkwesịrị ịpị bọtịnụ na keyboard "Ala". Iji mee ka usoro ahụ dị ngwa, ị nwere ike nanị ijiko ya.
Jide igodo "Ala" choro ruo mgbe akọrọ uru dị na ndepụta ahụ. Mgbe nke ahụ gasịrị ị nwere ike ịhapụ ịla Mgbanwe.
N'ihi ya, a ga-egosipụta adreesị niile na-acha anụnụ anụnụ.
Ugbu a, ị nwere ike ịfefe ha na Wọkspeesi ma dezie. Ọ bụrụ na ọ bụ n'ihi ihe ụfọdụ ụzọ abụọ mbụ na-adabaghị gị, anyị nwere ike ịnye gị nhọrọ ọzọ.
Usoro 3: Nhọrọ abụọ-Pịa
Dị ka aha ahụ na-atụ aro, usoro a kachasị mfe. Na ya, ị nwere ike ịhọrọ ngwa ngwa niile ụkpụrụ dị na Engine Engine. Na omume, ọ dị ka nke a.
Gaa usoro ihe omume ahụ ma mee nchọta ọchụchọ ọchụchọ.
Na ndepụta nke ụkpụrụ, choputa nke mbụ. Naanị pịa ya ozugbo na bọtịnụ òké aka ekpe.
Ugbu a anyị na-agbada na ala nke ndepụta ahụ. Iji mee nke a, ị nwere ike iji wiil òké ma ọ bụ ihe ntanetị pụrụ iche gaa n'aka nri nke ndepụta adreesị.
Ọzọ, jide igodo dị na keyboard Mgbanwe. Jide ya, pịa uru ikpeazụ dị na ndepụta ahụ na bọtịnụ òké aka ekpe.
N'ihi ya, a ga-ahọrọ data niile dị n'etiti akpa na adreesị ikpeazụ.
Ugbu a, adreesị niile dị njikere maka ịkwaga na arụ ọrụ ma ọ bụ ọrụ ndị ọzọ.
N'iji ụzọ ndị a dị mfe, ị nwere ike ịhọrọ ihe niile akpọrọ na Engine Engine na ozugbo. Nke a ga - enye gị ohere ọ bụghị naanị ịchekwa oge, kamakwa ịme ka mmejuputa ụfọdụ ọrụ rụọ ọrụ. Ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị na isiokwu nke mmemme hacking ma ọ bụ egwuregwu, mgbe ahụ, anyị na-akwado ka ị gụọ isiokwu anyị pụrụ iche. Site na ya ị ga-amụta banyere mmemme ndị ga-enyere gị aka n'okwu a.
Gụkwuo: ArtMoney akụrụngwa ngwanrọ